General al-Sisi oo digniin kulul jeediyay - BBC News Somali
Image caption Ciidanka ammaanka ayaa xoog u isticmaalay dadka banaanbaxayay
Hoggaamiyaha militeri ee dalka Masar abdul fatah al sisi ayaa digniin kulul u jeediyay taageerayaasha Madaxweynihii xilka laga riday Maxamed Morsi, taasi oo ah in marnaba aan loo dulqaadan doonin rabshad, laakiin hadal uu ujeediyay ciidamada iyo saraakiisha booliiska ayuu ku sheegay in qol walba meel uga banaan tahay Masar.
Waxa uu ahaa hadalkii ugu horreeyay ee uujeediyay tan iyo markii ciidamada ammaanku ay tallaabada ka qaadeen xisbiga Morsi ee Akhwaanu Muslimiinka, halkaasi oo boqolaal ay ku dhinteen. General Sisi waxa uu sheegay in difaaca rabitaanka dadka uu yahay ahmiyadda koowaad ee militeriga.
Kadib maalmo ay rabshado socdeen oo lagu dilay boqolaal dad ah, dowladda ku meel gaarka ah ee Masar waxa ay bilowday olole qiil loogub sameynayo tallaabada ciidanka ammaanka ee ka dhan ah taageerayaasha Madaxweynihii xilka laga riday Maxamed Morsi.
Wasiirka arrimaha dibedda, Nabil Fahmy, ayaa sheegay in dowladdiisa uu soo wajahay isku day lagu wiiqayay aasaaska qaranka.
Waxa uu sheegay haddii aanay dhici lahayn tallaabooyinkii ay qaadeen ciidanka ammaanka in dhimashada dadka ay ka sii badan lahayd.
Muuqaal lagu soo bandhigay shir safaaxadda uu u qabtay ayaa muujinayay dad banaanbaxaya oo qoryo ku hubeysan iyo calanka madow ee al-Qaacida oo uu sitay qof ka mid ah dadka banaanbaxayay.